🥇 ▷ Beta ugu dambeeyay ee 'iOS 13' wuxuu ka dhigayaa barnaamijyada inay furan yihiin laba jeer si dhakhso leh ✅
Beta ugu dambeeyay ee ‘iOS 13’ wuxuu ka dhigayaa barnaamijyada inay furan yihiin laba jeer si dhakhso leh
Markii Apple soo bandhigtay macruufka 13 iyo iPadOS bishii Juun, mid ka mid ah ballamihii ugu xiisaha badnaa ee la yimid labadan nidaam ee cusub ayaa ah hab cusub oo lagu abuuro barnaamijyada sameeya mashquul ilaa 50% wax ka yar, oo sababa Waxaa la soo dejistaa waqti dheer ka hor waxayna furan ilaa laba jeer soonka.
Khiyaamadihii ugu horreeyay ee iOS 13 howshan ma aysan shaqeynin, si kastaba ha noqotee beta ugu dambeeyay ee iOS 13 iyo iPadOS, lambarka 6, Waxaad ku dhaqaaqday ikhtiyaarkan oo barnaamijyadan hadda si dhakhso leh ayaa loo furi doonaa.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan hagaajinta noocan ah waa inay saameyn ku yeeshaan dhammaan aaladaha ku habboon nidaamka hawlgalka cusub, haddii aad leedahay jiil cusub iPhone ama iPad, xawaaraha waxay u egtahay inuu yahay mid aan la aqbali karin, si kastaba ha ahaatee con iPhone 6s ama iPad mini 4 farqigan ayaa si aad ah aad looga sii ogaan doonaa.
Waxaan awooday inaan isku dayo horumarintan iPhone X X oo wata codsiyada qaar iyo in kasta oo labada fowdo ay si dhakhso ah u furmaan, waa run in beta ugu dambeeyay ee macruufka 13 waxay ku sameeyaan xawaare aad u xawaare badan.
Xawaaraha 2x marka la furayo barnaamijyada gudaha # iOS13 Horaa loo dhaqaaqay waxayna muujineysaa: pic.twitter.com/rvliOIB3Ec
– Angel Roca (@ malaa’ig191) Ogast 13, 2019
Dhibaatada kaliya ee ilaa hada jirta ayaa ah in lagu raaxeysto xawaarahaan Codsiyada waa in dib loo soo celiyaa, taasi micnaheedu waa inaadan arki doonin isbadelka ilaa uu appku cusboonaysiinayo ama tirtirayo oo dib loo soo celiyo. Si kastaba ha noqotee, waa hab aad sameyn doontid adiga oo aan ka warqabin, in kasta oo aad had iyo jeer ku khasbi karto. Haddii marka aad kor u qaaddo macruufka 13 aad ka soo celiso xoqitaanka, dhammaan barnaamijyada ayaa lagu dhejin doonaa qaabkan cusub si dhakhso leh.
Marka laga hadlayo arrinta dhimista booska, waxaan awood u yeeshay oo keliya inaan fiiriyo dalabyada qaarkood, laakiin tusaale ahaan Facebook Messenger ayaa ka maqnaa ku dhawaad ​​278 MB kuna degay 144 MB, marka laga reebo dukumiintiyada iyo xogta aan keydinay sidii sawirro ama wax dhejisyo. Intaa waxaa sii dheer waxaan sidoo kale ku ogaaday Meelaha> Guud> Kaydinta inaan haysto xoogaa GB oo dheeraad ah. Tan waxaa la ogaan doonaa inta badan codsiyada badan ee aad rakibtay.
Xaqiiqdi waa shaqo weyn iyo Waa mid ka mid ah kuwa sida caadiga ah aan lagu baraarugsanayn laakiin lagu ogaanayo maalin walba, gaar ahaan haddii aad leedahay aalad leh sanooyin qaarkood oo leh awood aad u yar. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato macruufka 13 ha seegin wax kasta oo aan ku falanqaynay nidaamka cusub ee Apple, iyo haddii aad rabto inaad ku rakibto xusuusnow in beta dadweynaha uu horay u jiray.